बिशेष Archives - TV Annapurna
शनिबारको बिहान । १० वर्षीय हेनरी हेली उठिसकेका छन् । उनी पाइजामामै छन् तर उनको माइक्रोफोन जडित हेडफोनमा नीलो बत्ती बल्न थालिसकेको छ । उनी ठूलो स्क्रीनमा बच्चाहरुको लोकप्रिय अनलाइन खेल “फोर्टनाइट” खेल्न थालिसकेका छन् । “लौ ? मैले जित्नै लागेको थिएँ, म त मरें,” उनी गस नाम गरेका साथीलाई भन्छन् । पाँच कक्षाका यी सहपाठी साथी गसको घर हेनरीको भन्दा दुई–चार घर टाढा मात्र छ । “साथी, मैले हार्नु हुँदैनथ्यो ।” उनीहरुबीचको यो डिजिटल ब्याटल (प्रतिस्पर्धा) पुनः शुरु हुन्छ, र हेनरीको उत्साहमा कमी आएकै छैन । के बाबुआमाले नरोक्ने…
अमेरिकन हर्ट एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले घरेलु जनावर पाल्ने मान्छेहरुमा मुटुरोगको सम्भावना कम हुने तथ्य बाहिर ल्याएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार कुकुर पाल्ने परिवारमा हृदयाघात हुने सम्भावना कम रहेको देखाएको हो। यो सँगै अर्को संस्था बार्कपोस्टले घरमा कुकुर पाल्नुका फाइदाबारे वैज्ञानिक रुपमा प्रमाणित ५ तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। १. खुशी बढाउँछ, निराश हटाउँछ कुकुरसँग १५ देखि ३० मिनेट समय बिताउने मानिसमा तनाव घट्न गई खुसी बढ्ने हुन्छ। कुकरसँग खेल्नाले मानिसको मस्तिष्कमा खुशी र आनन्दसँग सम्बन्धित डोपामाइन र सेरोटोनिनको मात्रा बढाउँछ। यसले मानिसमा रहेको निराशा हटाउँन मद्दत गर्छ। २. मुटु…
November 15, 2018 November 15, 2018 TV-Annapurna
तपाईँ पक्कैपनि स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नु हुन्छ होइन ? त्यो हो भने फोन तातेर हैरानपनि हुनु हुन्छ होला ? अन्य फोनको तुलनमा स्मार्ट फोन अनेकौं कामका लागि प्रयोग हुने भएकालेपनि यो बढी मात्रामा तात्ने गर्छ । यसरी स्मार्ट फोन तातेमा के गर्ने त ? यो समस्याबाट यसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ : तातेको स्मार्टफोन चिस्याउने ५ उपायहरु १. फोनलाई आराम गर्न दिने हामीले जति चलाउँछौ, त्यती नै मात्रामा फोन तात्ने भएकाले तात्न लागेको संकेत पाउने बित्तिकै फोन नचलाउने वा प्रयोग कम गर्ने । २. अत्याधिक तातो वा चिसोमा नराख्ने मानिसको शरीर…
November 7, 2018 November 7, 2018 Annapurna TV
नेपालीहरुको दोस्रो ठुलो पर्व तिहारको रमझम छाईसकेको छ । पाँच दिनसम्म मनाइने यमपञ्चकको आज तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा । लक्ष्मीलाई धनकी देवीका रुपमा पनि लिइन्छ । धनकी देवीका रुपमा मानिने लक्ष्मी पूजाकै दिन नेपालमा लक्ष्मीले साथ दिएका मानिने केही धनाड्यहरुको कुरा गरौ । विश्वप्रसिद्ध म्यागेजिन फोब्र्सले हरेक वर्ष विश्वभरका धनाढ्यहरूको सम्पत्ति विवरणसहितको सूची सार्वजनिक गर्छ, जसका आधारमा संसारकै सर्वाधिक धनी को हो ? कसको सम्पत्ति कति छ र ? कसले कसलाई उछिन्यो जस्ता रोचक तथ्य बर्सेनि सतहमा आउँछन् । उक्त सूचीमा अहिलेसम्म एक जना नेपाली धनाढ्य विनोद चौधरी मात्र अटाएका…
November 6, 2018 November 7, 2018 Annapurna TV
आलोक यादव । श्रीमान मलेसियामा दोस्रो विबाह गरेपछि कर्जन्हा नगरपालिका बडा नम्बर ११ का ३५ वर्षीया अरहुलिया महतो बिच्चलीमा परेकी छिन् । करिब १५ बर्षदेखि मलेसियामा रहदै आएका ३८ बर्षीय श्रीमान किसुनलाल महतोले उतै इन्डोनेसियन केटीसंग विहे गरेपछि अरहुलियालाई थप चिन्ताले सताएको हो । करीब १७ बर्षअघि समाजिक परम्परा अनुसार कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर ६ बेतहाका अरहुलिया र सोही नगरपालिका बडा नम्बर ११ बगहाका किसुनलाल महतोबीच विबाह भएको थियो । विबाहको २ बर्षपछि किसुनलाल धन कमाउने उदेश्यले विदेशिएका थिए । फर्केर आउने आशामा रहेका बेला श्रीमान विदेशमै दोस्रो बिहे गरेको…
November 2, 2018 TV-Annapurna
नेपालीहरूमा भ्रमणप्रति रूचि बढ्दै गएको छ । आफ्नो हैसियतअनुसार स्वदेश वा विदेशको भ्रमणमा निस्कने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । अझ लामो बिदा हुने चाडपर्वको समयमा अधिकांश नेपाली स्वदेश वा विदेशको भ्रमणमा निस्किरहेका हुन्छन् । भ्रमणमा त्यहाँको दृश्य हेरेर मात्र पुग्दैन । यदि त्यहाँको जीवनशैली र खानपिनलाई पनि नजिकबाट अनुभव गर्न सकियो भने भ्रमण थप अविस्मरणीय हुन्छ । जानीराखौँ कुन देशमा कुन खाना लोकप्रिय छ । तोम याम गोङ थाइल्यान्डको भ्रमणमा जाने योजना बनाउनुभएको छ भने त्यहाँ तोम याम गोङ खान नबिर्सनुहोला । थाईहरू खाने–पिउने मामिलामा समृद्ध छन्, त्यसमध्ये पनि…
October 31, 2018 October 31, 2018 TV-Annapurna
अत्याधुनिक जीवनशैलीको सबैभन्दा ठूलो असर मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, तनाव र घरपरिबारको जिम्मेवारीलगायतका कारण हामी चाहेर पनि स्वस्थ बन्न सकेका हुँदैंनौं । कामको व्यस्तताले कतिपयले सुत्न समेत नपाएको गुनासो गर्ने गर्छन् । फुर्सद नपाएर आरामको लागि साप्ताहिक बिदा कहिले आउला भनेर औंला भाँच्ने जमात पनि उल्लेखनीय छ । व्यस्तताका कारण धेरैले स्वास्थमा ठूलो मुल्य चुकाएका छन् । खानपिन र आहारमा राम्रो बिचार पु-याएमा मानिस पूर्ण रुपमा स्वस्थ बन्न सक्ने विज्ञहरु बताउछन् । नियमित रुपमा यी खानेकुरा खाँदा मानिसको समग्र स्वास्थ्यमा सुधार आउने…
October 28, 2018 October 28, 2018 TV-Annapurna
बाल अवस्थामा पनि मानसिक समस्या वा रोग हुन्छ भन्ने धेरैजसो मानिसलाई थाहा नै हुँदैन। तर, युवावस्था तथा त्यो भन्दा बढी उमेरका व्यक्तिमा जति प्रकारको मानसिक रोग हुन्छ, त्यति प्रकारको मानसिक रोग बच्चाहरुमा पनि हुने गर्छ। मानिसलाई जन्मिनेबित्तिकैदेखि तनाव सुरु हुन्छ। बच्चा जन्मिसकेपछि उसको ध्यान आमाले दूध खुवाउँछिन्, खुवाउँदिनन् भन्नेमा हुन्छ। आमाले दूध दिइनन् भने बच्चालाई त्यही बेलादेखि तनाव सुरु हुन्छ। त्यस्तो बेलामा बच्चाले आफ्नो तनावलाई चिच्याएर, रोयर वा यस्तै प्रकारका अन्य क्रियाकलाप गरेर निकाल्ने गर्छ। बच्चाको उमेरसँगै तनाव पनि बढ्दै गएको हुन्छ। घरभित्र वा बाहिर, घरपरिवारको वा साथीभाइसँगको तनावलाई बच्चाले…
October 26, 2018 TV-Annapurna
– असन्तुलित भोजन अनिद्राको एउटा कारण हो । त्यसैले हरेक रात समयमै खाना खाने लक्ष्य बनाउनुस् । कहिले बढी र कहिले कम खाँदा समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले ठिक्क खाने गर्नुस् । स्वस्थ खानपिन गर्नुस् । – कार्यालयबाट हाकिमले म्यासेज गर्लान् भनेर आफ्नो स्मार्टफोन चेक गर्ने बानी छ भने तत्काल त्याग्नुहोस् गहिरो सास लिएर सोच्नुहोस्, आजको काम भोलि पनि हुनेछ । सुत्ने समयमा कार्यालयको चिन्ता गर्नु राम्रो होइन । – दिनभरको कामबाट थकान मार्न कक्टेल सेवन गर्नुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, धेरै रक्सी खाँदा तपाईंको निद्रामा असर पर्नेछ । अल्कोहलको सट्टा…